DHAGEYSO:Faarax Macalin oo ka hadlaya waxa ka dhexeeya Itoobiya iyo Mareykanka. | Voice Of Somalia
DHAGEYSO:Faarax Macalin oo ka hadlaya waxa ka dhexeeya Itoobiya iyo Mareykanka.
Posted on July 26, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Faarax Macalin oo ahaa jiray gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Kenya siyaasadana ad ula socda ayaa sheegaya in Itoobiya ku shaqeysanayso laba weji oo midna yahay kirishtaanimo midka yahay aragaxiso la dirir sidaas aawgeedna ay isku dhaw yihiin iyada iyo dowladda maraykanku.
kadib socdaalkiisa Kenya Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama waxaa lagu wadaa in uu u dhoofo dalka Itoobiya si uu ula xaajoodo madaxda dalkaasi.
Qodobada ugu horeeya ee laga wada hadlayo waxaa ka mid ah gaancsiga Maraykanka ee qaaradda afrika iyo la dagaalkanka Xarakada Mujaahidiinta Alshaab oo ah awood muuqata oo Bariga Afrika ku sii baaheysa.
Itoobiya ayaa weligeedba waxay xariir la lahayd cidda ugu tabar roon dowladaha reer galbeedka iyadoo hadafkeedu yahay in garab lagu siiyo gumaadka Muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo ay cadawgeeda koowaad u aragto.
WARBIXIN:Labo Dhurwaa iyo Sedax Dawoco oo Isku Heysta Baardheere!!
Waa yaabee Aaway Damiirkii Dadka Soomaaliyeed? Dadku miyuusan Yax-Yaxayn?!…. Ma Nicholas Kay ayaa sidow doono inaga yeelaya.